အာမေးနီးယားနိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ အာမေးနီးယားသမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကော့ကေးဆပ် (Caucasus)နှင့် ယူရေးရှား (Eurasia) ဒေသမှ တောင်ထူထပ်သော ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အနောက်တောင်အာရှ နှင့် အရှေ့ဥရောပ တို့ကြားတွင်တည်ရှိသည်။  အနောက်ဘက်တွင် တူရကီနိုင်ငံ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်တွင် နာဂိုမို-ကရာဘက်သမ္မတနိုင်ငံ (Nagorno-Karabakh Republic) နှင့် အဇာဘိုင်ဂျန်သမ္မတနိုင်ငံ၊ တောင်ဘက်တွင် အီရန်နှင့် အဇာဘိုင်ဂျန်၏ နာ့ခ်ချီဗန်ပြည်နယ် (Nakhchivan) တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။
↑ "The conversion of Armenia to Christianity was probably the most crucial step in its history. It turned Armenia sharply away from its Iranian past and stamped it for centuries with an intrinsic character as clear to the native population as to those outside its borders, who identified Armenia almost at once as the first state to adopt Christianity". ( Garsoïan, Nina (1997). in ed. R.G. Hovannisian: Armenian People from Ancient to Modern Times. Palgrave Macmillan, Volume 1, p.81။ ).
↑ Grousset, René (1947). Histoire de l'Arménie, 1984, Payot, 122။ . Estimated dates vary from 284 to 314. Garsoïan (op.cit. p.82), following the research of Ananian, favours the latter.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာမေးနီးယားနိုင်ငံ&oldid=473132" မှ ရယူရန်